Soomaaliya oo loo doortay Xubin ka tirsan Guddiga Xuquuqda Insaanka Qaramada Midoobay - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Soomaaliya oo loo doortay Xubin ka tirsan Guddiga Xuquuqda Insaanka Qaramada Midoobay
Soomaaliya oo loo doortay Xubin ka tirsan Guddiga Xuquuqda Insaanka Qaramada Midoobay
Soomaaliya ayaa ka mid noqotay mid ka mida guddiyada Qaramada Midoobay ee muhiimka ah, kadib markii ay tartan u gashay, sida ay shaacisay Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya.
Golaha guud ee Q/Midoobay oo cod u qaaday ayaa Soomaaliya loo doortay inay xubin ka noqoto Guddiga Xuquuqda Insaanka ee Qaramada Midoobay, waxayna Soomaaliya Golaha guud ee Q/Midoobay ka heshay codad dhan 170 dal oo u codeeyay inay Guddigaasi ka mid noqoto.
Soomaaliya muddo 3 sano xubin ahaa uga mid noqoneysa Guddigan oo markiiba loo doorto inay ka mid noqdaan 18 dal, waxayna saddexda sano bilaaban doontaa Janaayo 2019, waxayna xaruntiisu tahay magaalada Geneva.
Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa shaacisay in Soomaliya loo doortay xubin ka tirsan Guddigan iyadoo heshay 170 cod. Dalalka kale ee afrikaanka ah ee Guddigan loo doortay waxaa ka mida Eritrea, Togo, Burkina Faso and Cameroon.
Gaas oo Garowe geyn waayey Golihii Kismaayo & Galmudug oo noqotay: Tuke Nasiib...
Golaha Senet-ka Mareykanka oo ansixiyey Safiirka cusub ee Soomaaliya (Taariikhda Donald Yamamato]
Guddiga lagu muransanyahay ee doorashada dadban soo war saxaafadeed soo saaray
Madaxweyne Farmaajo oo Waraaqaha Aqoonsiga ka guddoomay Safiirka cusub ee Mareykanka [Sawirro]